ỊTỌỌTORRENT MAKA ỌSỌ ỌSỌ - UTORRENT - 2019
A ghaghị ile usoro nke Avast anya dị ka onye isi n'etiti free tools antivirus. Ma, ọ dị mwute ikwu, ụfọdụ ndị ọrụ nwere nsogbu na nwụnye. Ka anyị chọpụta ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na adighi etinye Avast?
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na ịmaghị ụzọ niile nke ịwụnye ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ, mgbe ahụ, ikekwe ị na-eme ihe na-ezighị ezi mgbe ị wụnye usoro ihe omume ahụ. Anyị na-enye gị ndụmọdụ ka ị gụọ otu esi esi wụnye Avast. Ọ bụrụ na ịnweghị obi abụọ na omume gị dị ọcha, mgbe ahụ, ihe mere na enweghị ike itinye ya bụ otu n'ime nsogbu ndị ahụ, anyị ga-atụle n'okpuru.
Nbudata na-ezighi ezi nke antivirus: idozi nsogbu ahụ site na iji usoro mmemme
Ihe kachasị kpatara nsogbu ndị a mgbe ị na-etinye Avast bụ nbudata ezighi ezi nke nsụgharị nke ngwa a, ma ọ bụ nke ọzọ antivirus.
Dị ka o kwesịrị ịdị, tupu ịwụnye Avast, ị ghaghị iwepu antivirus nke arụnyere na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ịmeghị nke a, ọ bụrụ na ịchọta usoro nke antivirus nke abụọ, nwere ike ime ka enweghị ike ịwụnye Avast, ọrụ ya na-ezighị ezi n'ọdịnihu, ma ọ bụ ọbụna inye aka na mberede usoro. Ma, mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-ezighị ezi, nke ga-eme n'ọdịnihu na-akpata nsogbu, tinyere ntinye nke software antivirus.
Ọ bụrụ na ịnweworị ịbịaru pụrụ iche n'oge iwepụ ihe omume ahụ iji wepu ngwa ngwa, ọ ga-adị nnọọ mfe ihichapu kọmputa gị site na ihe fọdụrụ na usoro antivirus ahụ. Ngwa ndị dị otú ahụ nyochaa mmemme niile awụnyere na kọmpụta ahụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ na nhichapụ a nwere "ọdụ", nọgide na-ahụ ha.
Ka anyị hụ otu esi achọpụta na wepu ihe fọdụrụ nke antivirus uninstalled n'ụzọ na-ezighị ezi site n'iji Mgbasaozi Wepụ. Mgbe ịmalite Ngwaọrụ Uninstall mepee ndepụta nke mmemme ehichapụrụ ma ọ bụ na-ezighị ezi. Anyị na-achọ Avast ma ọ bụ usoro mgbochi nje ọzọ nke arụnyere na mbụ ma ekwesịrị wepụrụ ya na kọmputa. Ọ bụrụ na anyị achọtaghị ihe ọ bụla, mgbe ahụ, nsogbu ahụ na enweghị ike ịbịnye Avast dị na ihe ndị ọzọ, nke anyị ga-atụle n'okpuru. Ọ bụrụ na ị chọpụta ihe fọdụrụ na usoro antivirus, họrọ aha ya, wee pịa bọtịnụ "Wepụ".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-enyocha nchekwa na faịlụ ndị dị na usoro a, yana ndekọ ntinye aha.
Mgbe nyochaa na nchọpụta dị otú ahụ, usoro ihe a na-achọ maka nkwenye nke iwepu ha. Pịa bọtịnụ "Hichapụ".
A na-ehichapụ ihe niile fọdụrụ na antivirus ehichapụrụ na-ezighị ezi, mgbe nke a gasịrị, ị nwere ike ịnwa ịgbanye antivirus.
Nbudata na-ezighi ezi nke antivirus: ngwọta ntụziaka nke nsogbu ahụ
Ma, ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na - ewepu antivirus, ọ bụrụ na ị nwere ike iwepụ ihe omume ahụ, ị ​​ga - N'okwu a, ị ga-eji aka gị dozie "ọdụ" niile.
Gaa site na njikwa faịlụ na ndekọ mmemme faịlụ. N'ebe ahụ, anyị na-achọ nchekwa nke aha antivirus ahụ e debere na kọmputa na mbụ. Hichapụ nchekwa a na ọdịnaya ya niile.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-ehichapụ folda ahụ na faịlụ nwa oge nke antivirus. Nsogbu bụ na usoro antivirus dị iche iche nwere ike ịnwe ya na ebe dị iche iche, ya mere, naanị ị nwere ike ịchọpụta ọnọdụ nke nchekwa a site n'ịgụ ntuziaka maka antivirus a, ma ọ bụ site na ịchọta azịza ya na Ịntanetị.
Mgbe anyị ehichapụre faịlụ na nchekwa, ị kwesịrị ikpochapụ ndekọ nke ntinye metụtara nje virus ahụ ehichapụ. Enwere ike ime nke a site n'enyemaka nke mmemme ọkachamara, dị ka ihe atụ CCleaner.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nwere ahụmahụ, ị ​​nwere ike iji aka ihichapụ ihe niile na-enweghị isi na-emetụta antivirus uninstalled site na iji nchịkọta edinyere edebanye. Mana nke a ga-eme nke ọma, ebe ị nwere ike imerụ usoro ahụ.
Mgbe nchachachara, gbalịa wụnye antivirus Avast ọzọ.
Ezughị mmelite usoro dị mkpa
Otu n'ime ihe ndị mere na Avast Anti-Virus enweghị ike ịwụnye nwere ike ịbụ eziokwu ahụ bụ na enweghi mmelite Windows ndị dị mkpa na kọmputa, karịsịa, otu n'ime nchịkọta MS + C Visual.
Iji kpochapụ mmelite niile dị mkpa, gaa na Ogwe Njikwa, gaa na mpaghara "System and Security".
Ọzọ, pịa ihe ndekọ "Lelee maka mmelite."
N'ihe banyere mmelite ndị akọwapụtara, pịa bọtịnụ "Wụnye Nwelite".
Mgbe ebudatara mmelite ahụ, anyị malitegharịa kọmputa ma gbalịa ịwụnye antivirus Avast ọzọ.
Ụfọdụ virus, ma ọ bụrụ na ọ dị na kọmputa, nwere ike igbochi ntinye nke mmemme nje virus, gụnyere Avast. Ya mere, na nsogbu nke yiri ya, ọ bụ ihe ezi uche dị na nyochaa usoro maka ọnụnọ nke koodu ọjọọ na ngwanyere nje virus nke na-adịghị achọ ntinye, dịka ọmụmaatụ, Dr.Web CureIt. Ma ọ bụ, ka mma, chọpụta diski ike maka nje ndị ọzọ site na kọmputa ọzọ.
Agaghị etinyekwa Avast Anti-Virus ka ọ bụrụ na ọ ga-emebi usoro sistemụ niile. Ihe mgbaàmà nke nkwụsị a bụ na ị pụghị ịwụnye ọ bụghị naanị Avast, mana ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, ọbụna ndị na-abụghị antivirus.
A na-emeso ya, dabere na mgbagwoju anya nke mmebi ahụ, ma ọ bụ site na ịlọghachite usoro ahụ maka mgbake, ma ọ bụ site na iweghachị sistemụ arụmọrụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbe ịchọrọ na enweghị ike ịwụnye usoro antivirus Avast, nke mbụ, ị ga-edozi ihe kpatara nsogbu ahụ. Mgbe e guzobere ihe ndị ahụ, dabere na ọdịdị ha, a edozi nsogbu ahụ n'otu n'ime ụzọ ndị dị n'elu.